सकारात्मक प्रयास: कोरोनापछि अब के होला ? | Kendrabindu Nepal Online News
18956875 710057 6094676 12152142
सकारात्मक प्रयास: कोरोनापछि अब के होला ?
२२ असार २०७७, सोमबार १२:१२
ज्ञानमणि नेपाल (कालोटोपी)
कोरोनाले संसार अस्तव्यस्त बनाएको छ । अब यो भनिरहनु परेन । कोरोनाले यस्तो बनायो, यति क्षति भयो, यति मान्छे संक्रमित भए, निको भए, मरे । यो हिजोआज दैनिकी जस्तै भएको छ । तर, अब यस्तो भनिरहनु भन्दा पनि भन्न यो जरुरी छ कि, कोरोनाले क्षति पुगेको अर्थतन्त्र कसरी माथि उकास्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी सहजीकरण बनाउने, कोरोना तत्कालै निर्मुल नहोला, योसँग अब कसरी घुलमिल हुने , लगायतका विषय अबको महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
हामी अब क्रमशः यस्ता विषयहरुको उठान गर्छौं कि अब कोरोना भइरहे पनि अर्थतन्त्रमाथि उकास्न के के गर्न सकिन्छ ? कोरोनाले उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ लगायतका विषय उठान गर्दै त्यहि अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने केही वर्षमै हामी पहिले भन्दा बढी समृद्ध बन्न सक्छौं ।
मानव जीवनमा समस्या सधैं आउँछन्, विगतमा पनि आए । विश्व इतिहास केलाउने हो भने मानिसमा हरेक क्षणमा समस्याहरु नआएका होइनन्, तर ती समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि मानिसमा ज्ञान छ । धैर्यता र सहनशिलताले मानव सभ्यता पूर्नजिवीत हुन सक्छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको विकसित मानव सभ्यता पनि त हामीले नै निर्माण गरेका हौं नि । शुरुवातमै विश्व अहिलेको अवस्था जस्तो त थिएन नि ।
हाम्रा पूर्खाहरुले कति सर्घष गरे, जतिबेला अहिले जस्तो आधुनिक प्रविधिहरु केहि थिएनन् । आज हामीसँग हरेक प्रविधी छन् , सीप छन् , संचार छ । यति मात्र होइन, विश्वका हरेक कुनाहरु अहिले साँघुरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब पनि सधैं समस्या मात्र आए भनेर डराउने हो भने समाज निर्माण हुनै सक्दैन । सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्ने हो भने नसकिने पनि केही छैन ।
संसारको सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हो मान्छे । हरेक अप्ठ्याराहरुको समाधान गर्न सक्ने खुबी छ ऊ सँग , त्यसो भए अब सधैं कोरोना मात्र भनेर पनि त हुँदैन नि । विगतमा पनि मानिससँग चुनौतीपूर्ण परिस्थितीहरु आएका थिए, अहिले पनि आएको छ । भोलि पनि यो समस्या आउन सक्छ । एकवर्ष अघिकै कुरा गर्ने हो भने हामीले यति छिटै विश्व नै प्रभावित होला भनेर कहिल्यै सोचेका थियौं र ? पक्कै थिएनौं तर अब समस्या आयो , यसले समाधान पनि लिएर आएको छ । अनि थुप्रै अवसर पनि आएका छन् । अब हामीले ती अवसरहरु खोतल्नु जरुरी छ । सधैं अप्ठ्यारा र समस्याका गीतहरु मात्र गाएर केही हुँदैन ।
हुन त हतारमा मानिसले सबैतिर अँध्यारो देख्छ, अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने तरिका बुझ्न नसक्दा उसले हत्या र आत्महत्याका बाटोहरु रोज्न सक्छ । तर यो समस्याको समाधान होइन बरु थप समस्या निम्त्याउने बाटो हो । हामीले यो सोच्नु पर्छ कि कोरोना त आइनै सक्यो अब कसरी यसलाई साथी बनाउन सकिन्छ ? कसरी यसबाट पार लगाउन सकिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि प्राकृतिक विपत्तिहरु नआएका होइनन् । भूकम्प, बाढीपहिरो, हुरी, महामारीहरु यी सधैं आएकै हुन् । केही न केही क्षति पनि हरेक दिन हुने गरेकै छन् । विश्व नै तहस नहस बनाएको कोरोना संक्रमण नयाँ हो तर यो अन्तिम समस्या भने होइन । विश्व नै ध्वस्त बनाउने र लाखौं मानिसको मृत्यु भएका महामारी विगतमा पनि थिए । अब पनि आउँछन् तर त्यसको पूर्व तयारी नहुने हो भने यो भन्दा जटिल समस्या थपिन सक्छन् । अब यतातिर पनि सोच्नु पर्छ ।
नेपालका हजारौं खेती योग्य जमिनहरु बाँझो भएका धेरै वर्ष भैसके । गाउँमा कुनै सम्भावना नदेखे पछि विदेशिएका लाखौं युवा जनशक्ति अब स्वदेश आउने क्रममा छन् । उनीहरुले चाहने हो भने देशका कुनै पनि भागहरु अब खाली रहने छैनन् , रोजगारीका लागि कृषि नै अबको भर पर्दो माध्ययम हो । सबैसँग पर्याप्त जग्गा जमिन नहोला , धेरै हुनेले सदुपयोग गर्न नसक्ने र नहुनेले आफ्नो सीप र जाँगरको सदुपयोग गर्न नपाउने समस्या पनि नेपालको अर्को जटिल समस्या बनेको छ । सरकारले यसमा अब सहजीकरण गराउनै पर्छ । वर्षेनी थपिएको श्रमशक्ति र कोरोनाले थपेको बेरोजगारी अन्त्य अब सरकारको प्रमुख कामको क्षेत्रमा रहनै पर्छ । हामीहरु काम गर्न तयार छौं भन्नेका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनै पर्छ । किनकी अब सधैं समस्याका गीत गाएर बस्ने अवस्था होइन यो ।
मुलुक यतिबेला लकडाउनकै अवस्थामा छ । अहिलेको रोग र महामारी समाधानका लागि यो एउटा प्रयास हो, गर्न जरुरी पनि थियो । तर एउटा महामारीको समाधानका लागि गरिएका प्रयासले थप सयौं समस्याहरु आएका छन् । यतिबेला केहि विकल्प नदेखेपछि यो अवधिमा १२ सय भन्दा बढीले आत्महत्या मात्रै गरेका छन् । अन्य दीर्घरोगका विरामीहरुको समयमा उपचार नभएर कतिले ज्यान गुमाएका छन् त्यसको तथ्यांक आएकै छैन । के यो चैं समस्या होइन र ? यसो भनेर कोरोनालाई समस्या नै होइन भन्न खोजेको पनि होइन , देशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म ३४ जना मात्र छ भने कोरोना नियन्त्रणका प्रयास पछिका समय अवधिमा अन्य कारणले मर्नेहरुको संख्या कयौं गुणा बढी छ । त्यसैले अब सधैं समस्या मात्र सोचेर हुनेवाला केही छैन । त्यो सोचाईले त झन वितृष्णा बढाउँछ , वितृष्णाले के गर्न सकिन्छ र ?
देशको यो जटिल अवस्था एकातिर छँदैछ । आर्थिक र स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ कार्यक्रमहरुका साथ अघि बढ्नु पर्ने भिजन सरकारको हुनु पर्ने हो तर झण्डै दुईतिहाईको भनिएको सरकार इतिहासकै कमजोर देखिएको छ । सरकार आफैं कसरी जोगिने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेलामा देश र जनतालाई उसले कसरी जोगाउन सक्ला ? यो सोचनिय भएको छ ।
हिजो जे भए पनि यतिबेलाको परिस्थिती कलह निम्त्याउनु पर्ने अवस्था होइन । हिजो जनतासँग जे बोलिएको थियो त्यसको विपरित राजनीतिक दलहरु हिंड्न थालेका छन् । यहि गर्नु थियो भने एकताको नाटक किन गरिएको ? यो प्रश्न आम नागरिकले सरकारसँग गरिरहेका छन् । छ यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग ?
विषम परिस्थिती हो अहिले । हामी सबै मिलेर समस्या समाधानका उपाय सोच्नु पर्छ तर नागरिक यतिबेला भन्न बाध्य छन्, के सरकार पनि छ र देशमा ?
बलियो सरकार आएपछि हत्या-हिंसा, बलात्कार रोकिएला भन्ने नागरिकको अपेक्षा पुरा त भएन, बरु संसदका नेतृत्वकर्ता नै बलात्कारीको आरोपमा नेतृत्वबाट पाखा लाग्नु पर्यो । सरकार त्यस्तै आरोपितहरुलाई जोगाउनतिर लाग्यो । कयौं निर्मला पन्तहरु आजपनि उसरी नै बलात्कृत भइरहेका छन् , सरकार रमिते बनिरहेको छ ।
बलियो सरकार आए पछि भष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले नै करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारको आरोप लागेर पद छोड्नु पर्यो । सरकार फेरि पनि तिनै मन्त्रीहरुलाई जोगाउन ज्यान दिएर लाग्यो । बलियो जनमत पाएको सरकारले गर्ने कामहरु यस्तै होलान् , नागरिक चित्त बुझाउन बाध्य छन् यतिबेला ।
बलियो सरकार आए पछि नीति नियमहरु पनि बलिया नै आउलान् भन्ने नागरिकको आशा त्यतिबेला तुहियो जतिबेला विकास निर्माणमा उहि पुरानै रोग निम्तियो । असार लागेपछि विकासका काम शुरु गर्ने र पैसा सिध्याएर सरकारी ढुकुटी रित्तो बनाउने अनि वर्षभरि निदाएर बस्ने काम यो सरकारको पालामा पनि निरन्तर नै रह्यो । अरुले काम गरेन भनेर गीत गाउनेहरुले आफूले नेतृत्व पाएर माखो पनि मार्न नसकेको अवस्थालाई सरकारले कसरी लिएको छ त्यो सोचनिय विषय हो ।
यसो भनेर सरकारले केही गरेन भन्न पनि मिल्दैन । सीमा विवाद समाधानका लागि गरेको प्रयास र नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम भने सरकारको महत्वपूर्ण काम हो ।
यी कुराहरुलाई एकातिर पन्छाउने हो भने अब सरकारले कोरोनाबाट समस्यामा परेको देशको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । नागरिकलाई हतास नहुन, सजग हुन र समस्या समाधानका लागि जुट्न अनुरोध गर्दै सरकार अघि बढ्ने हो भने नागरिक साथ दिन तयार छन् । तर यसका लागि पुरानो मानसिकता त्याग्दै नवीन सोच लिएर अघि बढ्न भने सरकार डराउनु हुँदैन ।
ज्ञानमणि नेपाल (कालोटोपी) केन्द्रबिन्दु मिडियाका बिहान सिफ्टका डेस्क प्रमुख हुन् । उनी बिगत १५ बर्षदेखि यही क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।
कोरोनापछि अब के होला, सकारात्मक प्रयास
Prevसुनको मूल्य सामान्य घट्यो, कति पुग्यो आज ?
नेकपा विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताको सक्रियताNext
बन्दाबन्दीमा एक चौथाइले गुमाए रोजगारी, बेरोजगार दर भयावह हुने
बुधबार तेह्रसय बढी नेपाली स्वदेश फर्किए